Wulfenite, si na Madagascar / okpuru mineral molybdate PbMoO4 / Video
Wulfenite, si Madagascar
Wulfenite bụ ịnweta molybdate ịnweta ya na usoro PbMoO4. A na-ahụkarị ya dịka kristal na-acha odo odo na-acha odo odo-acha odo odo, mgbe ụfọdụ aja aja, ọ bụ ezie na agba nwere ike ukwuu agbanwe. Na-acha odo odo a na-akpọkarị ya "odo odo".
Ọ na-eti mkpu na usoro tetragonal, na-emekarị dị ka nkume isi, pyramidal ma ọ bụ tabel. Ọ na-apụtakwa dị ka ndị na-eto eto, ndị nwere nnukwu mkpụrụ. A na-achọta ya n'ọtụtụ obodo, na-ejikọta ya na ndị na-ebute ụzọ dịka ihe ndị ọzọ na-ejikọta na mpaghara oxidized nke nkwụnye ego. Ọ bụkwa nke abụọ nke molybdenum, ndị nchịkọta na-achọkwa ya.
Nchọpụta na ihe omume
Ebu ụzọ kọwaa Wulfen na 1845 maka ihe mere na Bad Bleiberg, Carinthia, Austria. A na - akpọ ya Franz Xavier von Wulfen (1728-1805), onye ụkọchukwu nke Ọstrịa.
Ọ na - eme dịka ihe ịnweta nke abụọ na nkwụnye ego hydrothermal oxidized. Ọ na-eme na cerussite, anglesite, smithsonite, hemimorphite, vanadinite, pyromorphite, mimetite, descloizite, plattnerite na ígwè dị iche iche na manganese oxides.
Otu obodo a ma ama maka ebe a na-ebibi mmiri bụ Red Cloud Mine na Arizona. Nkume na-acha uhie uhie ma na-emekarị nke ọma. Obodo Los Lamentos nke dị na Meksiko mepụtara nnukwu nkume crystal.
Obodo ọzọ bụ Mount Peca dị na Slovenia. Ihe mkpuchi ahụ bụ odo, mgbe ụfọdụ na pyramid na bipyramid nke ọma. Na 1997, Postel Slovenia gosipụtara crystal na stampụ.
Ndị na-amachaghị ama ebe a na-eme ihe ndị a gụnyere: Sherman Tunnel, St. Peter's Dome, Tincup-Tomichi-Moncarch mining district, Pride of America mine na Bandora mine na Colorado.
Obere kristal dị na Bulwell na Kirkby na Ashfield, England. Ihe mkpuchi ndị a na-eme na mbara igwe na-eme ka mmiri na-ekpo ọkụ nke galena na-eme ka ọ dị na magnesian limestone. Umu ahihia nke a no na mpaghara a yiri ihe ndi ozo (usoro paragenetic, obere silver na ihe antimony nke ihe ndi ozo na enweghi pyromorphite) na ndi wulfenites nke Alps na ha nwere ike ibu ndi ozo.